News - Gịnị Bụ Kachasị Ewu n'Ọnụ Inwa?
Arc 'Teryx （Canada): Ahịa kachasị elu nke Canada, nke hibere na VANCOUVER, Canada na 1989, isi ụlọ ọrụ ya, ụlọ ọrụ imepụta ya, na usoro mmepụta ya ka dị na Vancouver. N'ihi na ọ fọrọ nke nta ka nzuzu ịchụso ọrụ aka ọhụrụ na teknụzụ ọhụrụ, n'ime ihe karịrị afọ iri, ọ toro na North America na ọbụlagodi ụwa na-eduga n'èzí, na ngwaahịa ndị dị mma n'ọhịa uwe na akpa azụ. Ngwaahịa ya na-etinyekarị na njem, ịrị elu na egwuregwu ice na egwuregwu snow, akpa azụ, uwe, itinye uche na nkọwa.
Nnukwu ngwugwu (Germany): akpa ihi ụra
Columbia (United States): ụdị akara izizi mbụ na United States, akwa mmiri ozuzo, mkpuchi mmiri, uwe ogologo ọkpa na ngwa, windbreakers, T-shirts, uwe elu, uwe ogologo ọkpa, akpaazụ, akpụkpọ ụkwụ na ejiji ski, wdg.
Jack Wolf Skin (Germany): nke izizi n'èzí. Akpa akpa, akpụkpọ ụkwụ n'èzí, ụlọikwuu, akpa ihi ụra, uwe na ngwa dị iche iche, wdg.
Lafuma (France): akpa ama ama French, akpa akpụkpọ ụkwụ, ụlọikwuu, akpa ihi ụra, uwe na ngwa njem dị iche iche, ihe nnabata, wdg.
LL Bean (USA): na-ere ọtụtụ ihe ntụrụndụ, yana akụrụngwa dị n'èzí. A na-ere ngwaahịa ya niile site na usoro ozi na ahịa na ntanetị, na-enweghị ndị nnọchi anya.
Marmot (United States): uwe snow, ala ihi ụra, na ụlọikwuu ugwu ugwu na-ewu ewu n'etiti ndị na-anụ ugwu ugwu.
Akụrụngwa Mountain (USA): uwe n'èzí, ụlọikwuu, nkọwa kachasị mma, onye ndu na uwe n'èzí.
Patagonia (United States): PATAGONIA bụ otu n’ime ụdị akwa akwa ama ama kachasị ukwuu na United States na Europe, ma nwee ọtụtụ ụlọ ahịa aha ikike n’ụwa niile. PATAGONIA adịkarịghị ego, nke nyeere ya aka ịtọlite ​​akara ngosi dị elu. Ngwaahịa Patagonia bụ ndị ama ama n'ụwa niile maka ilekwasị anya na nchekwa gburugburu ebe obibi na nchekwa akụ. Ebumnuche Patagonia na ebumnuche chọrọ ka mma ngwaahịa ya enwetala ọtụtụ onyinye n'ọtụtụ nyocha akụrụngwa n'èzí, ma bụrụ ndị otu ndị ọkacha mmasị kachasị amasị site n'èzí. Uwe ejiji ya dị mma karịa ngwaahịa ndị ọzọ dị n'èzí, nkọwa ndị ahụ dịkwa mma. Ngwaahịa ajị anụ ya bụ ihe a ma ama.
Vaude (Germany): ngwaahịa gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa niile n'èzí. N'ihe banyere uwe, o nwere ụfọdụ ihe eji eme ya.
Ugwu Ugwu (USA): ngwaahịa na-adịgide adịgide, ma gbanwee site na ngwaahịa ndị dị elu na ngwaahịa ndị a ma ama.
T'tiss (, Germany): T-shirts, uwe elu, jaketị, uwe ogologo ọkpa, wdg.